बलिउडमा लागुऔषध मुद्दा : एनसीबीद्वारा दीपिका, सारा र रकुलप्रितको मोबाइल नियन्‍त्रण – bampijhyala.com
Home > अन्तराष्ट्रीय > बलिउडमा लागुऔषध मुद्दा : एनसीबीद्वारा दीपिका, सारा र रकुलप्रितको मोबाइल नियन्‍त्रण
११ आश्विन २०७७, आईतवार २१:१५ bampijhyala
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । बलिउड लागुऔषध मुद्दाको जाँच गरिरहेको एनसीबीले बलिउड अभिनेत्री दीपिका पदुकोण, सारा अली खान र श्रद्धा कपुरसँग लामो समयसम्म सोधपुछ गरेको छ ।
सोधपुछपश्चात शनिबार एनसीबीले तीनैजना अभिनेत्रीको मोबाइल फोन नियन्‍त्रणमा लिएको छ । उनीहरुका साथै एनसीबीले फेसन डिजाइनर सिमाने खंबाटा र दीपिकाकी म्यानेजर करिश्मा प्रकाशको पनि फोन कब्जामा लिएको छ ।
एनसीबीले कब्जामा लिएको सबै फोनका डाटा रिकभर गरिनेछ ।
दीपिका, सारा र श्रद्धासँगको लामो सोधपुछ
एनसीबीले दीपिकासँग साढे ५ घण्टा सोधपुछ गरेको थियो । सोधपुछमा दीपिकाले २०१७ को अक्टोबरमा आफ्नी म्यानेजर करिश्मा प्रकाशसँग च्याट गरेको स्विकारेकी छिन्, यद्यपि उनले लागुऔषध सेवन, खरिद-बिक्रीमा भने संलग्‍न नभएको बताएकी छिन् । भने चुरोट भने सेवन गर्ने गरेको स्विकारिन् ।
यस्तै एनसीबीले सारा अली खानसँग चार घण्टा सोधपुछ गरेको थियो । साराले लागुऔषध कहिल्यै नलिएको तर चुरोट भने तान्‍ने गरेको स्‍विकारेकी छिन् । अभिनेत्री श्रद्धा कपुरले पनि लागुऔषध प्रयोग गर्ने कुरालाई नकारेकी छिन् । -नव भारत टाइम्स
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल ११ आश्विन २०७७, आईतवार २१:१५
सम्झनामा जेठ ३ ११ आश्विन २०७७, आईतवार २१:१५
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? ११ आश्विन २०७७, आईतवार २१:१५
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव ११ आश्विन २०७७, आईतवार २१:१५
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक ११ आश्विन २०७७, आईतवार २१:१५